OFX တောင်အမေရိက Evolution FSX & P3D
အရေးကြီးသော OFX တောင်အမေရိက Evolution FSX & P3D
1 months ago 10 တစ်နှစ် #559 by Ace9
ငါ၏အ Antivirus ကိုဗိုင်းရပ်စ်သတိပေးချက်ထကောက်နေနှင့်ငါ့ကို exe file ကိုဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမထားဘူးအဘယ်ကြောင့် "OFX တောင်အမေရိကဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် FSX & P3D" ကိုဒေါင်းလုဒ်ဖို့ဂျမ်ဘိုအခကြေးငွေပေးဆောင်ဘဲလျက်ငါစိုးရိမ်ပူပန်မိပါတယ်။
avast Win32 သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်: EVO-GEN
1 months ago 10 တစ်နှစ် #560 by Gh0stRider203
Rog ကြောင့်ကြော်ငြာ * CK ဖြစ်ခြင်း avast! ပါပဲ။ ငါကသုံးပြီးဆေးလိပ်ဖြတ်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ များလွန်းမိစ္ဆာလက္ခဏာ။ ကျွန်မအတော်လေးအချိန်အတန်ကြာ rikoooo အသုံးပြုဘယ်တော့မှတစ်ခုတည်းဗိုင်းရပ်စ်ဆည်းပူးပါတယ်။
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: Ace9
1 months ago 10 တစ်နှစ် #562 by Dariussssss
နေရာတိုင်း false နှိုးစက်အရမ်းရယ်ရတယ် ...
1 months ago 10 တစ်နှစ် #566 by Ace9
ငါက FTX အခြေစိုက်ရှုခင်းကဲ့သို့တူညီသောခဲ့တာကြောင့် install လုပ်ပြီးသားနဲ့ Stanley (ဖေါ့က်လဲန်းဒ) ထံသို့ ဝင်. ပြီ, ငါ config ကို check လုပ်ထားပြီ OFX တောင်အမေရိကကအထက်သာ Ushuaia လေဆိပ်နှင့်အတူဦးစားပေးစာရင်း၏ထိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ငါကျော်နှင့် exe installer ကို process ကိုအထက်ပျောက်ဆုံးငါတစ်ခုခုထိုကဲ့သို့သော OFX config ကို setting ကိုအဖြစ်, ရှိပါသလား?